समले भने, मलाई ‘शून्यम्’ मा विश्वास छैन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
समले भने, मलाई ‘शून्यम्’ मा विश्वास छैन
सन् १९८० मा कालिम्पोङबाट ‘नेपाली लिट्रेचर सिरिज’ मा प्रकाशित बालकृष्ण सममाथिको एक किताबले नेपाल–भारत साहित्य सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ ।
पुस २४, २०७८ जनकराज सापकोटा
दार्जिलिङ बसेर नेपाली साहित्यको सेवा गर्दै आएका पारसमणि प्रधानले सन् १९८० को दशकमा ‘मेकर्स अफ नेपाली लिट्रेचर सिरिज’ शीर्षकमा सात नेपाली साहित्यकारबारे बेग्लाबेग्लै किताब प्रकाशित गरेका थिए ।यही मेसोमा सन् १९८० मा प्रधानले साहित्यकार बालकृष्ण समबारे ८० पृष्ठको किताब निकालेका थिए ।
कालिम्पोङको भाग्यलक्ष्मी प्रकाशनले छापेको उक्त अंग्रेजी भाषाको किताब लेखक पारसमणिले सन् १९८० जुन १९ मा चित्रकार/साहित्यकार लैनसिंह बाङ्देललाई पठाएका थिए । हस्ताक्षरसहितको पुस्तकमा लेखिएको छ– विथ काइन्ड रिगार्डस श्री लैनसिंह बाङ्देल । पारसमणि प्रधान, कालिम्पोङ ।
पुस्तकको परिचय खण्डमा लैनसिंह बाङ्देल र आभार खण्डमा कमल दीक्षितले केही शब्द खर्चेका छन् । बाङ्देलले हाइस्कुल छँदा आफूलाई पारसमणिले पढाएको भन्दै गुरुको पुस्तकमा आभार लेख्नपाउनु ‘भाग्यको कुरा’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
साहित्यकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीदेखि तत्कालीन कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश रामकृष्ण शर्मा, भारतीय साहित्य अकादमीका पूर्वसभापति सुनीतिकुमार चटर्जी, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका हृषिकेश शाह, प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका मात्रिकाप्रसाद कोइरालालगायतका व्यक्तिको संक्षिप्त भनाइ पनि किताबमा छ ।
पारसमणिले उतिबेला नेपाली लिट्रेचर सिरिजअन्तर्गत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, भानुभक्त आचार्य, रूपनारायण सिंह र मोतीराम भट्टबारे पुस्तक लेखेर छापेका थिए । नौ अध्यायमा बाँडिएको यो पुस्तकमा समको समग्र व्यक्तित्व, साहित्य प्रवृत्ति, उनका कविता, नाटक, लामा कविताको प्रवृत्तिबारे पनि सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । समको चित्रकारिताबारे भने पुस्तकमा विस्तृतमा चर्चा गरिएको छैन ।
एक पाना समकै भनाइ पनि छापिएको छ । समले पारसमणिलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको आभारमा उनी निराशावादी सुनिन्छन् । समले लेखेका छन्, ‘अहिले म कविताको संग्रह गर्न लागेको छु । टाइप गर्दै छन् । अनि ‘तातो चुल्हो’ लेख्न लागेको छु, कहिले सिद्धिने हो ! संसारको परिस्थिति राम्रो छैन । केको आधारमा लेख्ने हो । किन लेख्ने ? लेख्नकै निम्ति हो कि ? कति क्षणिक !’
नेपाली सेनाको राजदल बटालियनका क्याप्टेन रहेर मासिक ६ सय तनखा बुझ्ने सम शारीरिक सुगठन र सैन्य गतिविधिसँगै करुणा रसले भरिएको सुललित साहित्य र कलामा पनि प्रखर रूपमा रहनुलाई पारसमणिले अद्भुत क्षमता भनी व्याख्या गरेका छन् । तर, किताबमा आफ्नो भनाइ लेख्दै समले उमेर पुगिसकेको र पक्षाघातपछिको आफू फरक महसुस गरिरहेको बताएका छन् ।
समले लेखेका छन्, ‘सम्झन मन लाग्छ, सर्व स्वलक्षणम्–सर्व क्षणिकम्–सर्व अनृतम–सर्व शून्यम । मलाई ‘शून्यम्’ मा विश्वास लाग्दैन, सर्व ‘ब्रह्म’ मा मेरो विश्वास छ– ओं खम ब्रह्म ! यो सब शून्य नभनेर ‘ब्रह्म’ भन्नाले नै हाम्रो अमरत्व रहन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । अनि लेख्न मन लाग्दछ, यो छ ।’
प्रकाशित : पुस २४, २०७८ १०:३९
३० वर्ष पुराना फाइल खोतल्दै प्रहरी
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले ५० को दशकमा भएका मानव बेचबिखनका फाइल उधिन्दै प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र
पुस २३, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले गत आइतबार (पुस १८) काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४, लोलाङ हाइटबाट टेकबहादुर लामिछानेलाई पक्राउ गर्‍यो । तीस वर्ष पुरानो मानव बेचबिखन घटना अनुसन्धान क्रममा लामिछाने पक्राउ परेका थिए ।
उनीविरुद्ध २०४९ असोज १६ मा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिपाऊँ भनेर जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
नयाँ बजारमा डेरा गरी बस्थिन् एक महिला । बालुवा खानीमा काम गर्ने क्रममा ती महिलाका श्रीमान् घाइते भएर वीर अस्पतालमा उपचार गरी गाउँ गएका थिए । त्यही मौकामा नजिकै दालचामलको पसल गरी बसेका लामिछानेले उनलाई काम लगाइदिने प्रलोभन देखाए । २०४९ जेठ ३० मा काठमाडौंबाट झापा र सिलिगुडी हुँदै दिल्ली पुर्‍याए । पीडित महिलाले दिएको जाहेरीमा लामिछानेले दुई भारतीय महिलासँगै उनलाई ट्याक्सी चढाएर पठाएका थिए ।
दुई जनाको कुराकानीबाट आफूलाई ३५ हजार भारुमा लामिछानेले बेचेको थाहा पाएपछि ती महिला ट्याक्सीबाट हाम्फालेर भारतीय प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन् । काठमाडौं फर्केलगत्तै ती महिलाले २०४९ कात्तिक २६ मा लामिछानेविरुद्ध तत्कालीन कानुन जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०४३ अनुसार कारबाही गरिपाऊँ भनेर काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी दिइन् । उनले दिएको उजुरीमाथि वर्षौंसम्म प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन ।
ब्युरोले २०७८ मंसिर २३ मा बेल्जियन नागरिक युवराज गुरुङलाई काठमाडौं आएका बेला पक्राउ गर्‍यो । गैरआवासीय नेपाली महासंघ बेल्जियमका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ पक्राउ पर्नुको कारण थियो– २२ वर्ष पुरानो मानव बेचबिखनको घटना । संखुवासभाको मादी स्थायी ठेगाना भएका गुरुङमाथि तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०५६ सालमा जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दाअन्तर्गत उजुरी दर्ता भएको थियो । उनले सुनसरीकी एक विवाहित महिलालाई बेल्जियम लगिदिने भन्दै काठमाडौंबाट भारतको दिल्ली पुर्‍याएर साढे पाँच लाख रुपैयाँ ठगेका थिए ।
प्रहरी बयानमा पीडित महिलाले आफूलाई प्रलोभन दिएर दिल्ली पुर्‍याई अलपत्र पारेको र रकमसमेत ठगेको बताएकी छन् ।
त्यतिबेला बानेश्वरनजिकै डेरा गरी बस्ने गुरुङले भने आफ्नो पीसीओमा आएका बेला महिलासँग चिनजान भएको बयान दिएका छन् । दुई सन्तानलाई छिमेकीकामा छाडी ती महिला गुरुङको प्रलोभनमा परेर हिँडेकी थिइन् । उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा थिए । साउदीबाट फर्केलगत्तै उनले गुरुङविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
पुरानो मिसिलमा संलग्न फाइलका अनुसार २०५६ सालमै प्रहरीले गुरुङको खोजीमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई गुहारेको थियो । तत्कालीन एसपी रवीन्द्रप्रताप शाहले गुरुङको खोजीमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासदेखि बेल्जियम दूतावासम्म पत्राचार गरेका थिए । तत्कालीन प्रहरीले टेलिकमबाट गुरुङले प्रयोग गर्ने भनिएको ल्यान्डलाइन फोनको कल डिटेलसमेत मागेको देखिन्छ तर टेलिकमले उपलब्ध नगराएपछि र दूतावासहरूबाट पनि आवश्यक सूचना नपाएपछि वर्षौंदेखि यो फाइल प्रहरीको दराजमै थन्किएको थियो ।
२०७८ असोज ६ मा ब्युरोले पेप्सीकोलाबाट लक्ष्मी विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्‍यो । लक्ष्मी पक्राउको कारण खोतल्दै जाँदा २५ वर्ष पुरानो घटनामा पुग्नुपर्छ ।
रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं आएकी एक युवतीलाई विश्वकर्माले भात पकाउने र लुगा धुने काम मिलाइदिने प्रलोभनमा विशालबजार लगेर अपरिचित पुरुषको जिम्मा लगाइदिएकी थिइन् । ती पुरुषले उनलाई काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारतको कोलकाता पुर्‍याएर ३० हजार भारुमा कोठीमा बेचिदिएका थिए ।
एकदिन उपचार गर्न अस्पताल जाने भन्दै युवती भागेर कोलकातास्थित तत्कालीन शाही नेपाली महावाणिज्य दूतको शरणमा पुगेकी थिइन् । नेपाल फर्केपछि उनले २०५३ साउन १ मा काठमाडौं प्रहरीमा विश्वकर्माविरुद्ध जाहेरी दिइन् । उनले दिएको जाहेरीमा प्रतिवादीको फोटो पनि थियो तर प्रहरीले वर्षौंसम्म अनुसन्धान अगाडि बढाएन ।
२०७६ वैशाख २९ मा प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो स्थापना भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट १६ र प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट ९२ वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी पुराना जाहेरीका फाइल झिकाएको थियो । तिनै फाइलको अध्ययनका क्रममा वर्षौंपछि लामिछाने, गुरुङ र विश्वकर्मा पक्राउ परेका हुन् । ब्युरोका अनुसार २० वर्षभन्दा पुरानो जाहेरीका आधारमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार मानव बेचबिखनका मुद्दामा हदम्यादको तगारो छैन । प्रहरीले वर्षौं पुराना घटनाको अनुसन्धानलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाइरहेको छ । २०६४ अघि मानव बेचबिखनका घटनाबारे मुद्दा चलाउनुपरे जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०४३ अनुसार गर्नुपर्थ्यो । अहिले भने प्रहरीले यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बनेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार मुद्दा चलाइरहेको छ ।
ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार २०४० देखि २०५० को दशकमा भएका अधिकांश मानव बेचबिखनका मुद्दामा पीडित महिला देखिन्छन् । काठमाडौंका मसाज सेन्टरबाट उद्धार भएपछि महिलाले दिएका जाहेरीका आधारमा जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाइएको भन्ने कसुरका ३१ जाहेरी छन् भने धेरैजसो जागिर वा बिहेको प्रलोभन देखाएर भारतका विभिन्न सहर पुर्‍याई यौनकोठीमा बेचिएका छन् ।
ब्युरो प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहका अनुसार पचासको दशकमा जीउ मास्ने बेच्ने कार्यअन्तर्गत परेका अधिकांश जाहेरीका पीडित महिला छन् । उनले मानव बेचबिखनको पछिल्लो प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दै भनिन्, ‘पहिला मानव बेचबिखनमा अधिकांश महिलामात्रै पीडित हुन्थे र ती धेरैजसो भारतीय कोठीमा वा यौन शोषणका निम्ति बेचिन्थे ।’ अधिकांश पुराना मिसिलको अध्ययन गर्दा रोजगारी वा बिहेको प्रलोभनमा स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहर पुर्‍याउने, तेस्रो देश पठाइदिनेको हकमा धेरैजसो फर्जी कागजात बनाउने गरेको देखिन्छ । पचासको दशकमा नेपाली तेस्रो देशमा जानका निम्ति दिल्लीस्थित युरोपेली देशका दूतावाससम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपालीलाई भारतसम्म पुर्‍याएर बेच्ने गरेको देखिन्छ ।
दशकौं पुरानो घटनाको अनुसन्धान प्रहरीको निम्ति त्यति सजिलो देखिन्न । पीडितको ठेगाना उल्लेख गरिएका कैयन् गाविस नयाँ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा परिणत भइसकेको, आरोपित संलग्न प्रमाणको भार कम भएको र डिजिटल इन्टेलिजेन्सबाट घटनाको पुष्टि गर्ने आधार नभएकाले यस्ता घटनाको अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार कैयन् घटनामा त पीडितले नयाँ जीवन सुरु गरिसकेको हुनाले घरबार बिग्रने जोखिमका कारण पनि अनुसन्धानमा सघाउन तयार देखिँदैनन् । गुरुङ र लामिछाने पक्राउको घटनाका पीडितले दोस्रो बिहे गरेको वर्षौं भइसक्यो । पीडितहरू परिचय खुल्ने वा पुरानो घटनाका कारण नयाँ घरबार बिथोलिने चिन्ताले खुल्न चाहँदैनन् ।
गुरुङमाथि थप कानुनी प्रक्रियाका लागि पक्राउको २२ दिनपछि ब्युरोले बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दाको फाइल पेस गरेको छ । पक्राउ परेका अन्यको हकमा भने ब्युरोले अनुसन्धान जारी राखेको छ । एसएसपी सिंहले भनिन्, ‘पुराना फाइल खोतलेर न्याय मर्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छौं ।’
प्रकाशित : पुस २३, २०७८ १२:०६
एक क्रान्तिकारी, एक लिजेन्ड
मेरो एकल गायन, मेरो एकल श्रोता
सङ्गीतका एक भर्च्युओसोको सम्झना
यो कस्तो अनुराग मिस्री ?
राउटे संसारसँग साक्षात्कार